गजलको सैद्धान्तिक परिचय: गजलका तत्वको संक्षिप्त अध्ययन | केशु बिरही
विचार केशु बिरही December 14, 2010, 8:33 pm
अरबिक माटोमा जन्मिएर हिन्दी, उर्दु भाषा हुदै भित्रिएको गजल विधाले नेपाली माटोमा आज एउटा लामो कालखण्ड विताइसकेको छ । दसौ शताव्दीमै इरानी अन्धा कवी रौदकी -अबु अब्द अल्लाह सफर इब्न मुहम्बत)ले जन्माएको विस्वास गरिएको यो विधा अरबी, फारसी, टर्केली, अंग्रेजी तथा अन्य भाषामा पनि प्रयोग हुदै आएको छ । झन यसले हिन्दी साहित्यमा त ठूलो स्थान ओगट्न सफल देखिन्छ । अन्य विधाको तुलनामा अग्रणी देखिन्छ ।
गायन तथा वाचन दुवै दृष्टिकोणमा यो विधा एक शसक्त रुपमा देखा परेको छ । पछिल्लो समयमा आएर यो विधाले नेपाली माटोमा पनि आफ्नो दरिलो उपस्थिती जनाइसकेको छ । अर्थात आफ्नो गतिलो प्रभाव जमाइसकेको छ । यो झन झन झांगिदो छ । फक्रदो र फुल्दो अवस्थामा छ ।
जीवन र जगतबाट प्राप्त अनुभव र अनुभूतिलाईर् कोमल, हार्दिक र कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल यो काव्यिक विधाले नेपाली साहित्यमा गायन र वाचन दुवै आधारमा आफ्नो प्रभाव छाड्दै एउटा छुट्टै छितिज निर्माणको यात्रामा पाइलाहरू अनवरत रुपमा अगाडि वढाइरहेको देखिन्छ ।
गजल विधालाई नेपाली माटोमा भिञ्याउने श्रेय भने मोतीराम भट्ट -वि.स.१९२३ -१९५३)लाई जान्छ । मोतीराम आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा भारतको वनारस गएको र त्यहा रहादा बस्दा उनको भारतीय गजलकारहरू संग गतिलो उठबस भएको बताइन्छ । यसै क्रममा गजलमा प्रभावित भएर उनले त्यहिबाट यो विधालाई नेपाली माटोमा भिञ्याएको मानिन्छ । हुन त गजललाई मोतीराम भन्दा अघि नै अरु कसैले नेपाली माटोमा भिञ्याइसकेका थिए पनि भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । ती व्यक्ती मगर थरका थिए भनेर कही कतै उल्लेख गरिए पनि त्यसको गतिलो प्रमाण भने भटिएको छैन । उनी को थिए ? कहाका थिए भनेर किटानीका साथ पनि लेखिएको पाइदैन । त्यसैले मोतीरामलाई नै गजलको प्रवर्तक मानिसकिएको अवस्था छ । यसरी मोतीरामलाई नै नेपाली गजलका प्रवर्तक मान्दा पनि नेपाली मोटोमा गजलले पाइला टेकेको सवा सयको भन्दा लामो समय भै सकेको छ । एउटा लामो कालखण्ड नै वितिसकेको छ भन्न सकिन्छ ।
लामो समयसम्म सुशुप्त अवस्थामा वसेको गजल विधाले तीसको दशक पछि मात्र मौलाउने अवसर पायो । झागिने अवसर पायो । वि.स. २०३६ -गजलको आधुनिक/ पुनर्जागरण काल) साल पछि भने यसले व्यापक रुप नै लिन पुग्यो । वि. स.२०४६ साल पछि गजल लेखनमा एउटा वहार नै आएको छ । झन वि.स.२०६० पछि त के बुढा के तन्नेरी सवै गजल लेख्नमा तम्सिएका देखिन्छन । गजलमा होमिएका देखिन्छन । गजलमा आफ्नो पनि छाप छोड्न होस वा आफ्नो प्रभावलाई कायमै राख्न होस सवै दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन । हत्तारिरहेका देखिन्छन ।
गजल शव्दको स्रोत, व्यत्पति र अर्थ
गजल शव्दको स्रोतका वारेमा विद्वानहरूमा एकमत पाइदैन । एकथरीले यसलाई अरबी भाषाबाट आएको वताएका छन भने अर्काथरीले फारसीबाट । सवैले आ- आफ्नो धारणा अघिसारेका छन । तर अधिक विद्वाहरूको मत भने यो अरबी भाषाबाटै आएको ठहर छ । त्यही ठहरका साथ गजल पछिल्लो समयमा अघि वढेको पाइन्छ । त्यसैले अव गजल शब्दको स्रोतलाई अरबी नै मान्नु पर्ने कुरामा सवैजसोको सहमति देखिन्छ ।
फारसी स्रोत मान्नेहरूले गजल शव्दको व्युत्पति ‘गजला’बाट भएको बताएका छन । फारसीमा यस्को अर्थ हुन्छ मृगनयनी वा सुन्दरी । त्यसैको आधरमा गजललाई प्रेम र नारीको वयान गर्ने एक गतिलो माध्यमका रुपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
अरबी स्रोत मान्नेहरू यो अरबी साहित्यको कसिदाबाट आएको विस्वाश राख्छन । अरबीमा साहित्यमा प्रचलनमा आएको कसिदा र मर्सिया नामका दुई काव्य विधा थिए । कसिदाले जिवित व्यक्तीको वर्णन वा प्रशंसा गर्दथ्यो भने मर्सियाले दिवंगत व्यक्तीको । कसदिको आरम्भको दुई वा चार हरफको पद्यांशलाई तश्बीब भनिन्छ । कसिदाको यही अंशले नै पछि आएर गजलको रुप लियो । यही तश्बीबले कालन्तरमा आएर गजलको रुप लियो । र पछि आफ्नो अलग्गै अस्तित्व स्थापित गरेको वताइन्छ । तश्बीबले प्रायः प्रेमालापलाई नै वर्णन गर्ने भएकोले यसले गजलको स्वरुप प्राप्त गर्दा प्रेमीका साग वार्तालाप गरिने विधाको रुपमा चिनिएको हो भन्ने धेरैको मत रहेको छ ।
यही आधारमा अडिएर गजलकार मनु ब्राजाकीले गजल -ग+ज+अल्)को व्युत्पतिलभ्य अर्थ लगाएका छन । गजल शव्द अरबिक भाषाबाट आएको हो । अरबी भाषामा ग बाणी, ज स्त्री र अल् वार्तालाप भन्ने अर्थ हुन्छ । अरबी भाषाको यो अर्थलाई हेरेर नै गजललाई नारीसंग गरिने प्रेममय वार्तालाप भनिएको हुन सक्छ । त्यसैले गजलको संवन्ध प्रेमसंग जोडिएको र त्यही आधारमा गजलको सिर्जना गर्ने गरिएको पाइन्छ । आज यही मान्यतामा अडिएर गजल सिर्जना गर्नेको संख्या पनि कम छैन । अझ यसलाई केहीले त मात्र ‘गाजल’ अर्थात सौन्दर्य रुपमा पनि हेर्ने गरेका छन ।
यसैगरी गजल शव्दको व्युत्पतिको वारेमा एउटा छुट्टैखाले किंवदन्ति पनि रहेको छ । पहिला अरवमा ‘गजल’ नामका व्यक्ती थिए रे । उनले आफ्नो पुरै जीवन प्रेम र मस्तीमा डुवेरै विताउथे रे । उनी प्रेमकै विषयमा कविता पनि लेख्थे रे । प्रारम्भमा उनले लेख्ले गरेको प्रेमपरक कविताको स्मरणमा पछि लेखिएका यस्तै खाले कवितालाई पछि आएर गजल भन्न थालिएको हुन सक्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि गजलकार डा. कृष्णहरि बरालले आफ्नो पुस्तक गजल सिद्धान्त र परम्परामा उल्लेख गरेका छन ।
अंग्रेजी भाषामा न्बशभिभ शब्द छ । इहायचम मष्अतयलबचथ ले न्बशभिभ को अर्थ Smबिि बलतष्यिउभ वताएको छ । Smबिि बलतष्यिउभ को अर्थ बल बलimब चिभकझदष्लिन ब मभभच हुन्छ । अर्थात हरिणको सानो वच्चा वा शावक ।
अंग्रेजी भाषाको न्बशभििभ शव्द र यही शव्दको अर्थलाई हेरेर नै समालोचक देबी पन्थीले हरिणको वच्चा -शावक)ले शिकारीको तीरबाट घायल वनेर एक्कासी निकालेको आवाज नै गजलको रुप हो र पछि त्यही ‘गजला’ शव्द अपभ्रंश भएर गजल भएको हुन सक्छ भन्ने आफ्नो धारणा गजल सिद्धान्त र समालोचना नामक पुस्तकमा अघि सारेका हुन सक्छन ।
त्यस्तै पछिल्लो समयमा आएर गजलको शाब्दिक अर्थलाई फरक फरक ढङ्गले पनि परिभाषित गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यसै क्रममा समालोचक देवी नेपालले ‘गजल’को व्युत्पतिबाट यस्तो व्यञ्जनात्मक अर्थ प्रस्तुत गरेका छन ।
ग- गम्भीरता, गेयत्मकता, वा गतिशीलता
ज- जीवन्तता, जनपि्रय वा जादूपूर्ण
ल- लयात्मकता, लाक्षणिकता वा ललितता
तर जे जस्ता भारणा वा परिभाषा आए पनि यो विधाको सुरुवात भने सृङ्गार वा प्रेम बाटै भएको हो भन्ने ठाउहरू यथेष्ठ मात्रामा पाउन सकिन्छ । यो ध्रुवसत्यलाई छिपाउन सकिदैन । र छिपाउन मिल्दैन पनि तर अर्को सत्य पनि के हो भने पछिल्लो समयमा आएर गजलले आफ्नो क्षेत्रलाई फराकिलो वनाइसकेको छ । आजको गजलले सि्रङ्गार वा प्रेमभावलाई मात्र वोकेको छैन । यसले तमाम जनसरोकार विषयलाई उठाउदै आएको छ । यो मामलामा सफल पनि देखिएको छ । आज गजलले आफ्नो क्षेत्रलाई व्यापक वनाउदै नेपाली माटोमा आफ्नो दरिलो उपस्थिती जनाउन सफल भइसकेको छ । अर्थात गतिलो प्रभाव जमाइसकेको छ । यो आझ झन झन झांगिदो छ । फक्रदो र फुल्दो अवस्थामा छ ।
गजल संवन्धी धारणा वा परिभाषाहरू
“गजल अत्यन्त संवेदनशील र तीक्ष्ण विधा हो । यसमा सुक्ष्म र तिख्खर अभिव्यक्ती रहेको छ ।” – ज्ञानुवाकर पौडेल
“गजल भनेको प्रणय, कामना र आन्तरिक पीडाका हार्दिक भावहरूको सुललित अभिव्यक्ती हो ।” – मनु ब्रजाकी
“प्रेम विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एक प्रकारको फारसी छन्द वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कविता ।” – नेपाली बृहत शव्द कोष
“गीत र कविता आ- आफ्नै विशेषता भएका दुई नदी हुन् भने गजल तिनीहरूको संगम हो भन्न सकिन्छ । तर गजललाई गीत वा कविता मात्रै बनाउनु वा भन्नु अनविज्ञता सिवाय अरु केही पनि होइन ।” – डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’
“गजल कोमल र हार्दिक भावको सशक्त र सङ्क्षिप्त अभिव्यक्ति हो । यसमा काफिया र लय अनिवार्य तत्वका रुपमा रहन्छन । आभुनिकताका नाममा यी दुई तत्वलाई बिगार्न मिल्दैन ।” -ललिजन रावल
“भ्व, कल्पना, बिम्ब तथा प्रतिक आदिको प्रयोगका साथै निश्चित क्रममा प्रयोग गरिने यस्तो काव्य रुपलाई गजल भनिन्छ । जसमा एउटै छन्दका तीन वा तीन भन्दा बढी स्वतन्त्र शेरहरू हुन्छन ।” -डा. कृष्णहरि बराल
“गजल गेयात्मक र संगीतात्मक विधा हो ।” – अमर त्यागी
“गजल नेपाली साहित्यमा स्थापित उपविधा हो ।” – परशु प्रधान
“गजल फारसी र उर्दूमा एक प्रकारको कविता हो । जसमा एउटै वजन र काफिया र अनेकन शेर हुन्छन र प्रत्येक शेरको बिषया प्रायः एक अर्कासंग स्वतन्त्र हुन्छ ।” -उर्दू हिन्दी कोश
गजलका वारेमा धेरै खाले धारणा व् परिभाषाहरू आएका छन । कसैले गजललाई गाजल मात्र ठानेका छन भने कसैले गजल गाजल मात्र नभएर गाजल धारण गर्ने आाखा हो भन्न पनि पछि परेका छैनन । कसैले गजललाई छुट्टै काव्यिक विधाको रुपमा त कसैले गजललाई कविताको उप विधाको रुपमा हेरेका छन । त्यस्तै गीतसंग तुलना गर्ने पनि देखिन्छन ।
गजल अत्यन्त संवेदनशील र तीक्ष्ण विधा, आन्तरिक पीडाको हार्दिक भावहरूको सन्तुलन अभिव्यक्ती मोन्ने गजलकार द्वय ज्ञानुवाकर पौडेल र मनु ब्राजाकीको परिभाषाले गजलको वैशिष्ठतालाई प्रष्ठ पार्न खोजेको देखिन्छ भने परशु प्रधानको परिभाषाबाट गजललाई एउटा छुट्टै विधाको रुपमा स्वीकार गरेको आसय पाइन्छ । उनले गजललाई नेपाली साहित्यमा एउटा स्थापित उपविधा हो भनेका छन ।
गजललाई गीत र कविताको संगम मान्न सकिने तर गजललाई गीत वा कविता भन्नु चाही अज्ञानता हो भन्ने अभिव्यक्ती दिएर गजलको महत्वलाई अझ प्रष्ट पार्ने काम भएको छ डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’को परिभाषाबाट । यसले गाउन सकिने भएकोले गजल गीत हो भन्ने वुझाइलाई गलत भएको वताएको छ । गजल र गीतमा केही समानता हुदा हुदै पनि धेरै भिन्नता भएको वताएका छन ।
ललिजन रावलले गजलमा लयको कुरालाई बढावा दिएका छन । उनले कफिया र लयलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा लिएका छन । वीचारको पछि मात्र लागेर लयअनुशासालाई ध्यान नदिनेहरूको लागि भने यो गतिलो जवाफ सावित भएको छ । अमर ‘त्यागी’को परिभाषा पनि ललिजन संग सन्निकटता देखिन्छ । उनको विचारमा गजल गेय विधा हो । यसलाई वाचनमा मात्र सिमित नगरेर गायन तर्फ अग्रसर गराइनु पर्नेमा जोड दिएका छन । त्यस्तै डा. कृष्णहरि बरालले भाव, कल्पना, बिम्ब र प्रतिकलाई महत्व दिदै गजललाई एउटा काव्यिक विधाका रुपमा लिएका छन । अर्थात उनले गजललाई कवितासंगै दाजेर हेरेका छन ।
त्यस्तै नेपाली बृहत शव्दकोषको र उर्दू हिन्दी कोशको गजल संवन्धी धारणा भने पुराना देखिन्छन । यी दुवैले गजलको छुट्टै अस्तीत्वलाई स्वीकारेका छैनन । नेपाली बृहत शव्दकोषले गजललाई “प्रेम विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एक प्रकारको फारसी छन्द वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कविता ।” हो भनेको छ । त्यस्तै उर्दू हिन्दी कोशले “गजल पारसी र उर्दूमा एक प्रकारको कविता हो । जसमा एउटै वजन र काफिया र अनेकन शेर हुन्छन र प्रत्येक शेरको बिषया प्रायः एक अर्कासंग स्वतन्त्र हुन्छ ।” भनेको छ ।
यी दुवै धारणा वा परिभाषाहरू समय सान्दर्भिक देखिदैनन । धेरै पुराना र त्यतिकै अव्यवहारिक पनि देखिन्छन । यी परिभाषालाई भने परिवर्तन गर्नु पर्ने दखिन्छ । नेपाली बृहत शव्द कोषले भने झैं अव गजल प्रेम विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एक प्रकारको फारसी छन्द वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कवितामा मात्र सिमित रहेन । त्यो मान्यता त अव पुरानो भैसकेको छ । गजलले आज आफ्नो क्षेत्रलाई फराकिलो पारिसकेको छ । पुरानो मान्यतालाई भत्काउदै आज गजलले मानव जीवनका अन्य सरोकार राख्ने सवै खाले विषय वस्तुलाई उठाउदै आएको छ र त्यसमा सफलता पनि हाता पारेको छ ।
जस्ले जे जस्तो धारणा वा परिभाषा अघि सारे पनि गजल एउटा कोमल तथा हार्दिक विधा हो । गजल सरल तथा सरस विधा हो । यसले सरलता र सरसता भित्रै सशक्तताको खोजि गर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन । सवैले यो कुरालाई स्वीकारेका छन र स्वीकार्नु पर्छ नै । गजल र गीतमा केही समानता हुदा हुदै पनि यी दुई अलग अलग विधा हुन ।
गीत, गजल र कविता एउटै हुनै सक्दैनन । अझ गजल एउटा छुट्टै विधा हो । यसको आफ्नै परिधी वा संरचना छ त्यसलाई भत्काएर गजल नै बन्न सक्दैन ।
गजललाई मैले भने यसरी परिभाषित गर्ने गरेको छु । शव्द र विम्बको ओजपूर्ण सुललित अभिव्यक्ती नै गजल हो । जस्को छुट्टै परिधी वा संरचना छ । त्यही परिधी वा संरचन भित्र रहेर गजलमा भाव, लय र वीचारले खेल्न पाउनु पर्छ ।
प्राथमिक काल वि. स. १९४० – वि. स. २०००
पुनर्जागरण कालः वि. स. २०४० – वि. स. २०५०
विकास कालः वि. स. २०५० साल यता
प्राथमिक कालः वि.स.-१९४० वि.स.- १९९२
माध्यमिक कालः वि.स.-१९९३ वि.स.-२०३५
आधुनिक कालः वि.स.-२०३६ यता.
प्राथमिक कालः वि.स.-१९४० वि.स.-१९९२
आधुनिक कालः वि.स.-२०३६ यता
- डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’
आधुनिक कालः वि.स.-१९९३ वि.स.-२०३५
पुनर्जागरण तथा आधुनिककालः वि.स.-२०३६ यता
- देवी पन्थी
पूर्वार्द्ध वि. स. १९४०-२०३५
प्रथम चरण -वि. स. १९४०-२००२)
द्वितीय चरण -वि. स. २००३ -२०३५)
उत्तरार्द्ध वि. स. २०३६ देखि यता
काल विभाजनमा पनि सवैका आ-आफ्नै वीचारहरू रहेका छन । केहीले प्राथमिक र पुनर्जागरण काल । प्राथमिक, माध्यमिक, र आधुनिक काल । प्राथमिक र आधुनिक काल । प्राथमिक, पुनर्जागरण तथा आधुनिक काल । पूर्वाद्व र उत्तरार्द्व गरी दुई र तीन काल खण्डमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।
यसरी काल विभाजन गर्ने क्रममा प्राथमिक कालको सुरुवातलाई सवैले एउटै समय -वि.स.-१९४०) लाई माने पनि त्यस्तो अन्त्यलाई भने फरक फरक रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । कसैले वि.स.१९९२ लाई प्राथमिकालको अन्त्य मानेका छन भने केहीले वि.स.१९९६ लाई । विं. स.-२००० लाई मान्नेपनि छन । त्यस्तै पुनर्जागरणकाल र आधुनिककाललाई पनि केहीले एउटै समयावधीमा रोखेका भए पनि त्यसको समय तोक्ने कुरामा मत वाझिएको पाइन्छ । धेरैले वि.स.२०३६ साल पछिको समयावधीलाई गजलको आधुनिककाल मानेका छन ।
गजल विधाको कालक्रम तोक्ने भनेको समय मात्र होइन । यसको शैली तथा प्रवृति पनि हो । शैली तथा प्रवृतिगत आधारमा छुट्याइनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी शैली तथा प्रवृतिगत दुष्टिले हेर्दा वि.स. १९४०- वि.स. १९९६ प्राथमिक काल मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसमा धेरै सहमत देखिन्छन । किनभने मोतीराम भट्ट देखि उपेन्द्रबआदुर ‘जिगर’को ‘एक रुप एक गजल संग्रह’ -१९९६) प्रकाशन सम्मको समय शैली तथा प्रवृतिगत रुपमा समानता पाउन सकिन्छ । त्यति भिन्नता पाउन सकिदैन । त्यस पछि वि.स.२०३५ साल सम्म गजल पूर्ण रुपमा सेलाएको अवस्था छ । त्यो सवैले स्वीकारेकै छन । तसर्थ वि.स.१९९६ – वि.स.२०३५ को समयावधीलाई माध्यमिक काल मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै वि. स. २०३६ साल देखि यताको समयलाई आधुनिक तथा पुनर्जागरण काल मान्नु उपयुक्त देखिदा देखिदै पनि यस अवधीलाई दुई भागमा वाढेर हेर्नु मुनासिव ठहरिन्छ ।
समयले आज ठूलो फड्को मारिसकेको छ । अर्थात आजको अवस्थामा आइपुग्दा गजलले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको छ । २०३६ साल देखि पछिको समय अवधीको गजलक्रम पनि एकैनासले विकाश भएको पाइदैन । २०३६ साल देखि २०४६ साल पछिको परिवर्तनको केही साल सम्मको गजलको विकाश क्रम एक तरिकाले भएको छ भने त्यस पछिको गजलको विकाशक्रम अर्कै तरिकाले भएको पाइन्छ । तसर्थ यो वीचको समयलाई पनि अव अलग्गै रुपमा छुट्याएर हेर्नु मुनासिव हुने मैले ठानेको हु । त्यही आधारमा गजलकार ललिजन रावलले वि.स. २०४० देखि वि. स. २०५० सम्मको समयलाई आधुनिक वा पुनर्जागरण काल र वि. स. २०५० साल पछि पछिको समयलाई भने नेपाली गजलको विकास काल मान्नेका छन ।
उनको पछिल्लो काल विभाजन केही सान्दर्भिक जस्तो लागे पनि उनले वि. स. २००० देखि वि. स. २०४० सम्मको ४० बर्षको अवधीलाई काल विभाजनमा उल्लेख नगर्दा अलि अपुरो जस्तो लाग्न जान्छ । किन भने यो अवधीमा गजल सुन्य भए पनि मृत चााही थिएन भन्न सकिन्छ ।
प्राथमिक कालः वि.स.- १९४० वि.स.- १९९६
माध्यमिक कालः वि.स.- १९९६ वि.स.- २०३५
पुनर्जागरण /आधुनिककालः वि.स.- २०३६ – वि. स. २०५०
गजलको कुनै छुट्टै वा अलग्गै विशेष क्षेत्र भने देखिदैन । यसले साहित्यका अन्य विधाले उठाउने गरेका यावत विषय वस्तुहरू नै गजलका विषयवस्तु वन्ने गरेका छन । त्यसैले गजलको छुट्टै क्षेत्र वा विषय छ भन्नु अज्ञानता वाहेक केही पनि होइन । गजलले हिजो प्रेमी र प्रेमीकाका कुराहरू अर्थात प्रणयभाव मात्र वोक्न सक्छ भन्ने मान्यतामा पनि परिवर्तन भैसकेको छ । र यसले त्यो पुरानो मान्यतालाई भत्काएर नया मान्यतालाई स्थापित पनि गरि सेको छ । यसले पछिल्लो समयमा मानव जीवनका सरोकारका सवै विषय वस्तुहरूको उठान गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आएर गजलको यो नै क्षेत्र हो भनेर कित्ता लगाउने काम ठीक होइन भन्ने मेरो वीचार हो ।
हुन त गजलको जन्म प्रणयभावबाटै भएकोले गजललाई श्रृगारिक धारामा मात्र सिमित गर्नु पर्छ भन्ने वीचार पनि यदाकदा आउने गरेका छन । कहिलेकही केही सर्जक मित्रहरूबाट यस्तो आवाज उठ्ने गरेको छ । तर पछिल्लो समयमा गजलले पाएको व्यापकता र लोकपि्रयताले त्यस्ता वीचारहरूलाई स्वत अप्रमाणित गरिदिएका छन ।
गजलको भाषा सरल र सरस हुनु पर्छ । सुवोध्य खाल्को हुनु पर्छ । थोरै शव्दले पनि धेरै अर्थ दिन सक्नु नै गजलको विशेषता हो । गजललाई कोमल तथा हार्दिक वनाउनलाई भाषाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अर्थात शव्द र विम्बसंग खेल्न जान्नु पर्छ । शब्द र बिम्ब संग खेल्न जान्ने, शब्दको लाक्षणिक अर्थ दिन सक्ने सर्जक नै वास्तवमा सफल गजलकार कहलिन्छ ।
संरचाका दृष्टिले कसकास गरेर मात्र सफल सिर्जना वन्न सक्दैन । समालोचकहरूले गजलमा रदिफ, काफिया र लयको अनिवार्यतालाई मात्र पूरा गरेर मात्र सुन्दर गजल सिर्जना वन्न सक्दैन, त्यसको लागि त गजलभित्रको जीवन्त भाव, चिन्तन र विचारले पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने विचरलाई अघि सार्दै आएका छन । गजलको भाषालाई महत्व दिदै आएका छन ।
-१) विषयवस्तुको आधारमा
-२) रदिफको आधारमा
-१) विषयवस्तुको आधारमा गजललाई दुई किसिम विभाजन गरिएको छ । ती हुनः
-क) मुसलसल गजलः यसमा गजलका सवै शेरहरू एउटै विषयवस्तुमा आधारित भएर लेखिएका हुन्छन
-ख) गैरमुसलसल गजलः यसमा गजलका शेरहरू फरक-फरक विषयवस्तुमा आधारित भएर लेखिएका हुन्छन ।
-२) रदिफको आधारमा पनि गजललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
-क) मुरद्दफ गजलः – यसमा रदिफ र काफिया दुवैको प्रयोग भएको हुन्छ ।
-ख) गैरमुरद्दफ गजलः – यसमा रदिफको प्रयोग गरिएको हुदैन ।
-नोटः- उदाहरणहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन ।)
गजलका तत्वहरूको निर्धारण गर्ने कुरामा पनि फरक फरक मत रहेका छन । कसैले रदिफ, काफिया , मतला, मकता, बहर -छन्द) आदिलाई वताएका छन भने केहीले गजलका तत्वका रुपमा भाव तथा विषय वस्तु, कल्पना, सङ्गीत, बिम्ब तथा प्रतिकका साथै भाषालाई समेत गजलका तत्वका रुपमा लिएका छन । संरचनाद्वारा कुनै रचनाले गजलको रुप धारण गरे पनि काव्यको लागि आवस्यक मानिने तत्वहरूका अभावमा केनै पनि रचना गजल बन्नै नसक्ने कुरा डा. कृष्ण्हरि बरालले गजलः सिद्धान्त र परम्परामा उल्लेख गरेका छन ।
गजलका तत्वका वोरेमा जे जस्ता कुरा आए पनि शेर, रदिफ, काफिया, मतला, मकता, बहर, तखल्लुस आदि नै मुख्य हुन । भाव, बिम्ब, प्रतिक, अलङ्कार आदिलाई गजलका मुख्य तत्वका रुपमा परिभाषित गर्नु सान्दर्भिक ठहरिदैन । किनभने बिम्ब र प्रतिक भनेका गजलका भाषा र लय भित्रै समायित हुने गर्छन । एउटा सुन्दर सिर्जना भित्र कतै न कतै यी तत्वहरू अटाएकै हुन्छन । तसर्थ गजलका तत्वहरूमा शेर, रदिफ, काफिया, मतला, मकता, तखल्लुस, बहर, भाषा र लयविधानलाई नै मुख्य तत्व मान्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
यहा गजलको आधारभूत संरचनाको वारेमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हुन त आजभोलि गजलका निम्न लिखित सिद्धान्तको वारेमा सामान्यरुपमा ज्ञान भैसकेको छ । तै पनि नया तथा सिकारु गजलकारका लागि यी तत्वको वारेमा जानाकारी दिनु आवस्यक ठानेको छु । त्यसैले गजलमा प्रयोग हुने केही तत्वहरूको वारेमा केही चर्चा गरौं ।
एउटै लय वा छन्द -बहर)मा बाधिएका दुई पङ्िति मिलेर शेरको निर्माण हुन्छ । जसरी एउटा कवितामा श्लोक -कतबलशब) वा अनुच्छेद हुन्छ त्यसैगरी गजलमा शेर हुन्छ । गजलका अनुच्छेद वा श्लोकलाई शेर भनिन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई -अयगउभित) वा दुई पङ्तिको श्लोक भनिएको छ ।
अर्थात समग्रमा भन्दा गजल शेरमा अनुवन्धित हुने साहित्यिक रचना हो । शेर अरबी भाषाबाट आएको शव्द हो । यो अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । यसको शाव्दिक अर्थ ‘केश’ हुन्छ । केशलाई सौन्दर्य वा प्रेमको प्रतिक पनि मानिन्छ । ‘शेर’ दुईओटा हरफ वा लाईनबाट निर्माण भएको हुन्छ । केही उदाहरण हेरौः -
कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न वाकी थियो ।
तिमी भने हिडी हाल्यौ केही भन्न वाकी थियो ।। -ललिजन रावल
ढाटी छली आफूलाई कति बाच्न सकिएला ?
हृदयमा पीर बोकी कति हास्न सकिएला ? – मनु ब्राजाकी
माल्सिरी भाखा सागै गाए राम्रो हुन्थ्यो ।। – बूद राना
गजलका प्रत्येक दुई पङ्क्तिलाई मिसरा भनिन्छ । अर्थात दुई मिसरा मिलेर एउटा शेरको निर्माण भएको हुन्छ । शेरको पहिलो पङ्क्तिलाई ‘मिसरा ए उला’ र दोश्रोलाई ‘मिसरा ए सानी’ भनिन्छ । ‘मिसरा ए उला’ र ‘मिसरा ए सानी’को सम्वन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रति हुन्छ । यी एक आपसमा असंवन्धित भएमा असंवन्धता दोश हुने कुरा डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ले आफनो पछिल्लो कृति गजल मिमांसा र सौन्दर्यमा उल्लेख गरेका छन । ‘मिसरा ए उला’ ले उठाएको जिज्ञासा वा कौतुहलतालाई ‘मिसरा ए सानी’ टुङ्ग्याउने नै गजलको विषेशता हो । कहिलेकही ‘मिसरा ए सानी’ ले उठाएको जिज्ञासा वा कौतुहलतालाई ‘मिसरा ए उला’ ले पनि समाधान गर्न सक्छ । यी दुवै एक आपसका अन्योन्याश्रति पङ्क्तिबाटै शेरको पूर्ण भाव अभिव्यक्त भएको हुन्छ । केही उदाहरण हेरौः -
एक थोपा आसु पनि तर्न गाह्रो भयो । -मिसरा -ए उला)
भङ्गालोमा तरु भन्छु पर्न गाह्रो भयो । -मिसरा ए सानी) -बिजय सुब्बा
खाली छन् है प्रतगिका पाना यता गाउातिर । -मिसरा -ए उला)
चुहेका छन् हिजोजस्तै छाना यता गाउातिर ।। -मिसरा ए सानी) -चंकी श्रेष्ठ
जानी जानी राती पार्यौ नजाऊ यती राती भन्यौ । -मिसरा -ए उला)
कोही छैनन् घरमा आज, हिंड जाऊा माथी भन्यौ । -मिसरा ए सानी) -निश्प्रभ सज्जी
मतला वा मत्ला भन्नाले गजलको प्रथम शेर हो । यसलाई गजलको शीर मानिन्छ । यो अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । अरबी भाषामा यसलाई ‘मतलअ’ भनिन्छ । मतलाको शाव्दिक अर्थ ‘उदय हुनु’ वा ‘आरम्भ हुनु’ भन्ने हो । त्यसैले यसलाई गजलको टाउको पनि मानिएको हो । गजलमा ‘मतला’लाई गजलको प्रतिनिधि शेर पनि भनिन्छ । त्यसैले गजलमा मतलालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको हुन्छ । केहीले यसलाई गजलको परिचय शेरको संज्ञा दिएर अपुरो अर्थ लगाउन पनि खोजेका छन तर यो आफैमा पूर्ण शेर हो । गजलका शेरहरू कहिल्यै पनि अपुरा हुनै सक्दैन । सर्धैं पूर्ण हुन्छन । एउटा गजल ‘मतला’बाट सुरु भएर ‘मकता’मा गएर टुगिंन्छ । मतलाका केही उदाहरण हेरौः -
हताहत यहा धेरैको रहर भएछ ।। -ज्ञानुवाकर पौडेल
थाहै नपाई अनायसै, रिसाउछु राजेश्वरी ।
तिम्रै यादले सिरानीलाई भिजाउछु राजेश्वरी ।। -कृशु क्षेत्री
एक पल्ट बााधिहेर जञ्जिर त्यो खोली हेर ।
मुस्काएको नजरले लुम्बिनी त्यो भोलि हेर । – रामगोपाल आशुतोष
गजलको मतला र त्यस पछिका हरेक शेरका ‘मिसरा ए सानी’मा आउने शब्द वा -स्वर) शब्द समूह नै नै काफिया हुन । काफिया अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । यसको अर्थ ‘बावम्बार आउने’ भन्ने हुन्छ । त्यसरी काफियामा भएका शव्दहरू भने परिवर्तन गर्न सकिए पनि स्वरहरू भने अपरिवर्तित हुन्छन । काफियालाई गजलको मुख्य तत्वको रुपमा लिइन्छ । काफियाको अभावमा गजलको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । त्यसैले यसलाई गजलको मुटु मानिएको हो । गजल सिर्जनामा गजलकारले यसको प्रयोगमा धेरै ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अन्यथा गजल भनेर सिर्जना गरिएको रचना गजल नभएर पजल पनि हुन जान्छ ।
प्राथमिक कालका गजलहरूमा त्यो कमजारी देखिएको ललिजन रावलले प्रतिनिधि नेपाली गजलहरू भाग- ५ मा उल्लेख गरेका छन । ती गजलहरू सारमा मात्र नभएर रुपगत हिसावले पनि अति नै कमजोर भएको पनि उनको दावी छ । त्यसो भनेर आजभोलिका गजलहरूमा त्यो दोश छदै छैन भन्ने तर्फ भने उनको आसय होइन र लिनु पनि हुादैन । आजभोली गजलमा पनि त्यो दोश प्रसस्त मात्रमा देख्न सकिन्छ । गजलका नाममा फजलको सिर्जना भैरहेका छन । ती सवै कुरा काफियाको मर्मलाई नवुझ्दा भएका हुन । काफियाका केही उदाहरण हेरौः -
पाखा र पखेरा नाचेको मान्छे म म ।
सिन्की र ढिंडोमा बाचेको मान्छे म ।। -गोर्खे साइलो
माया दिएर राखे गाली गरेर भाग्यौ ।। -घनेन्द्र ओझा
हृदयका आवाजहरू, थुनिदैछन् अझै पनि ।। -खगेन्द्र गिरी ‘कोपिला’
पल- पल आखाबाट झरेको छु आज ।
थाहा छैन आफैलाई मरेको छु आज ।। -पुष्प अधिकारी ‘अञ्जली’
काफियालाई पूर्ण, आंशिक र एकाक्षरी गरेर मुख्यतया तीन भागमा विभाजन गरिए पनि पछिल्लो समयमा आएर पूर्ण, आंशिक, मिलित र एकाक्षरी गरी चार भागमा विभाजन गरिएको पनि पाइन्छ । धेरैले भने पूर्ण काफियालाई वढावा दिएका छन । काफियाको यो प्रयोगलाई मात्र दोश रहित मानेका छन । तर गजलमा आंशिक, मिलित र एकाक्षरी काफियाले पनि उतिकै मान्यता पाएका छन । पूर्ण, आंशिक, मिलित वा एकाक्षरी काफिया जे हुन गजलकारले गजल सिर्जनामा काफियाको स्वरलाई भने चिन्न सक्नु पर्छ ।
-क) पूर्ण काफियाः पूर्ण शब्दको प्रयोग भएका अर्थात स्वर र व्यञ्जनका आधारमा श्रुतिसमान शब्दलाई पूर्ण काफिया हुन । जस्तै गर्न, तर्न, मर्न, र्झन, भर्न, छर्न । त्यस्तै पिएकी, जिएकी, लिएकी, सिएकी आदि । पराई, तराई, मराई आदि । पूर्ण काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौंः -
घरको छत् ‘नि तराई हुन्छ तिम्रो सहरमा ।
छिमेकी ‘नि पराई हुन्छ तिम्रो सहरमा ।। -प्रकाश आङदम्बे
घातीसाग मनको बह फुकाउनु हुन्न सानु ।
बिनाकसुर उचो शीर झुकाउनु हुन्न सानु ।। -प्रकट पगेनी ‘शिव’
जसै गजल लेख्न वसे बहर बोकी आयौ तिमी ।
अनायसै सम्झनाका लहर बोकी आयौ तिमी ।। -अञ्जु अञ्जली
आंशिक काफियाः पूर्ण रुपमा नभै त्यस शब्दमा केही वर्ण मात्रै काफियाको रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन । जस्तै कहानी, सिरानी, निशानी, दिवानी, जिन्दगानी, रानी आदि । आंशिक काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौं -
तिमी उसैलाई भन्छौ पुजारी हो त्यो । डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’
नबोल बोल सुस्तरी लुकाइ बैास षोडसी ।
नखोल खोल अङ्गका उमङ्ग रङ्ग घसी ।। -नवराज लम्साल
तिमी साथ भए पछि भगवान पनि चाहिदैन ।
मेरो रात जग्मगाऊ, विहान पनि चाहिदैन ।। -सुरेश वाग्ले
तिमी हास्नलाई मलाई रुवायौ ।
बडो सञ्च मान्दै चिमोठी दुखायौ ।। -रमेश ‘शुभेच्छु’
यसमा स्वर र व्यञ्जनको ध्वनी समान भएका पद वा बाक्यको काफियाका रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन । जस्तै गर्छ यो, भयो, गयो, छन त, भन त आदि । मिलित काफिया प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौं -
रातमा छाया परेर हो कि अधेरो जगत ।। -बूद राना
शब्दको अन्त्यमा एउटा अक्षर मात्र काफियाका रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन । जस्तै यो, त्यो, को हो भो आदि । एकाक्षरी काफियामा निर्मित गललको शेरको उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै बल्न खोज्दा प्रकाश टुक्रिन्छ दियाहरूको ।
टुक्रिएरै बल्न खोज्दा सधैंभरि हार होला जिन्दगीको ।। -ललिजन रावल
मतलाको दुवै पङ्क्तिका ‘मिसरा ए उला’ र ‘मिसरा ए सानी’ को अन्त्यमा दोहोरिएर आउने शव्द वा शव्द समूह नै रदिफ हुन । रदिफ अरबी भाषाको स्त्रीलिङ्गी शब्द हो । यसको अर्थ ‘पछिपछि आउने’ भन्ने लाग्छ । रदिफ काफियाको पछि प्रयोग हुने हुनाले यो ‘पछिपछि’ आउने अर्थ सान्दर्भिक नै देखिन्छ । कापियालाई ‘पुर्वानुप्रास’ र रदिफलाई ‘अन्त्यानुप्रास’ पनि भन्न सकिन्छ भन्ने पनि छन । यो मतलाका दुवै शेरमा र वााकी मिसराका सवै दोश्रो पङ्ति, ‘मिसरा ए सानी’मा आउछ ।
प्रयोगको आधारमा गजललाई ‘मुरद्दफ’ र ‘गैरमुरद्दफ’ गरी दुई भागमा बााडिएको पाइन्छ । मुद्दरफ भन्नाले रदिफ प्रयोग गरिएको र गैरमुद्दरफ भन्नाले रदिफ प्रयोग नभएको गजल भन्ने अर्थ जनाउाछ । हुन त रदिफ विना पनि गजलको सिर्जना गर्न सकिन्छ । विना रदिफ लेखिएका गजलहरू पनि नेपाली गजलमा प्रशस्तै भेटिन्छन । केहीले यसलाई अनिवार्य तत्वको रुपमा नलिइ ऐक्षिक तत्वका रुपमा पनि उल्लेख गेरेका छन । रदिफ शब्दले ‘घोडसवारको पछि वस्ने मानिस’ भन्ने अर्थ जनाउछ । घोडा चलाउन पछाडिको मानिसको आवस्यक्ता पर्दैन । अर्थात उसको अभावमा पनि घोडा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लिएरै रदिफको प्रयोगलाई ऐक्षिक मानेका हुन सक्छन । तर यस्को प्रयोगले गजललाई झनै सुन्दर वनाउछ । अझ यसरी पनि भनौ न घोडासवार पछि अर्को मानिस पनि छ भने संभावित खतराबाट जोगाउाछ । लड्न दिदैन । त्यसैले यसको प्रयोगलाई महत्व दिइएको हो । केहीले यसलाई अनिवार्य तत्वको रुपमा पनि लिने गरेका छन । रदिफ प्रयोग भएका र रदिफप्रयोग नभएका केही शेरहरू हेरौः -
मुरद्दफ गजलका शेरहरू उदाहरण
खालि आसु बगाउनु- तिम्रो भाग्य हैन ।
एकान्तमा रमाउनु- तिम्रो भाग्य हैन ।। – रासा
क्षणिक झिल्का भै नवल साथी ।। -केशु बिरही
तिमी हुादा पो त हुन्छ पूणिर्माको रातै मजाको ।। ‘विवश’ बलिभद्र कोइराला
‘गैरमुरद्दफ’ गजलका शेरहरू उदाहरणः
अझै पनि यो मुटुमा तिम्रै माया साचिरा’छु ।
तिमी आउने दिन गन्दै औलाहरू भाचिरा’छु ।। -सुन्दर कुरुप
न्याय गर्न तिमीबाट ब्वाासोलाई तोकिएछ । – श्रेष्ठ पि्रया ‘पथ्थर’
यस्तै छ जिन्दगी सधै हतारमा छु । -सुरेश वाग्ले
रदिफलाई मूख्यतया ‘स्वतन्त्र’ र ‘मिश्रति’ गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
-क) स्वतन्त्र रदिफः गजलका शेरमा स्वतन्त्र एकाइको रुपमा दोहोरिएर आउने शव्द नै स्वतन्त्र रदिफ हुन । जुन काफियाको पछि विना परिवर्तन आउने गर्छन ।
-ख) मिश्रति रदिफः काफियाको पछि वा काफिया संगै एकाकार भएर आउने रदिफ नै मिश्रति रदिफ हुन ।
त्यस्तै देवी नेपाल, सुरेश सुवेदी र घनेन्द्र ओझा -लेखक त्रय)द्वारा लिखित गजल कसरी लेख्ने ? भन्ने कृतिमा रदिफलाई पदमूलक, पदावली मूलक र वाक्यात्मक गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । सोही कृतिबाट केही उदाहरण पनि लिऔ ः
-क) पदमूलक रदिफः काफिया पछि एउटा पद मात्र रदिफको रुपमा आएको हुन्छ ।
ब्रमा खुड्किलो चढ्छ जो चढ्न द्यौ ।।
बढ्छ राको अझै युद्धको बढ्न द्यौ ।। -बलराम दाहाल
तिमी फूल गुरास भन्छ्यौ म खसेको पात परे ।
बाहिरै देऊ पिउने पानी म झरेको जात परे ।। -’विवश’ बलिभद्र कोइराला
दुई वा दुई भन्दा वढी शब्द काफियाको रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन ।
आसु झारी पिएकी छ मेरी धरा ।। -सुसैन खाा
जून झर्दा तिमी एक्ली थियौ ।। -रासा
हजारौ थरी बात लगायौ तिमीले ।। -सुरेश सुबेदी
एउटा पुरै वाक्य नै रदिफको रुपमा प्रयो भएका हुन्छन ।
जुन मोडमा बिदा लियौ, म छु आज सम्म त्यही पि्रया ।
अ, हिजो तिमी पनि त्यै थियौ, म छु आज सम्म त्यही पि्रया ।। -शारदा सजल
कमै मिल्ने प्यारजस्ती, मायाको के कुरा गरौ ।
बहुमूल्य हारजस्ती, मायाको के कुरा गरौ ।। -रुपक बनबासी
अरबी भाषाको ‘मक्तूअ’बाट विकसित हुदै ‘मकता’ वा ‘मक्ता’ भएको हो । गजलको अन्तिम शेरलाई मकता भनिन्छ । यसलाई गजलको टुङ्ग्याउनी पनि भनिन्छ । केहीले ‘तखल्लुस’ प्रयोग भएको छ भने मात्र मकता हुने नत्र मिसरा नै मान्नु पर्ने मत पनि अघि सारेका छन । तर मतलालाई गजलको आरम्भ वा थालनी मानिसके पछि अव मकतालाई गजलको अन्त्य भाग मान्नु उपयुक्त देखिन्छ । चाहे त्यहा तखल्लुस प्रयोग गरिएको होस् या नहोस । किन भने तखल्लुसलाई अनिवार्य तत्व मानिएको छैन । तखल्लुस राख्ने वा नराख्ने त्यो लेखकमै भर पर्ने कुरो हो । तखल्लुस प्रयोग नभएको शेरलाई मकता नमाने मिसरा मात्रै मान्ने हो भने त्यो गजलको अन्त्य कहिल्यै हुने ? के तखल्लुस प्रयोग नभएको गजलको अन्त्य नै हुादैन त ? तसर्थ विना संकोच गजलको अन्तिम शेरलाई मकता भन्नु नै उपयुक्त हुन जान्छ । मकताका केही शेरहरू हेरौः -
प्रगतिबादी वोल्न ऊ भक्भकाएर आउने छ ।। – सिवाकोटी पुरानाघरे
बितेको रात हु मेरो कहानी के सुनाउा ।। -गोपाल अश्क
दिनमा तर्किएर हिड्नुको मजा ।
भेट्न आउाछु भनेको राति रहेछ ।। -वियोगी बुढाथोकी
‘तखल्लुस’ अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । गजल वा सायरीमा लेखकले आफ्नो नाम वा उप नाम राख्ने चलन रहेको छ । लेखकको त्यही नाम वा उप नामको रुपमा प्रयोग भएर आउने शब्दलाई ‘तखल्लुस’ भनिन्छ । हुन त यसलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा भने लिइएको पाइदैन । यसलाई ऐक्षिक तत्वको रुपमा हेरिएको छ । यस्ले गजललाई सुन्दर वनाउछ । अझ अर्थपूर्ण वनाउछ । सुन्दर वा अर्थपूर्ण वनाउने हुनाले यस्को प्रयोगलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिनु जरुरी देखिन्छ । तर असान्दर्भिक रुपमा गरिएको तखल्लुसको प्रयोगको भने कुनै अर्थ रहदैन । सही तखल्लुसको प्रयोगले मात्र गजलकारको परिपक्कताको वोध गराउछ । तखल्लुस प्रयोग भएका केही शेरहरू हेरौं ।
सायद कुनै पविर्तन हुदैछ ।
‘विभोर’ बिनाकारण क्रुद्ध हुदैन ।। -विभोर बराल
छर्नेहरू छरिर’छन जनताका नाम ।
‘विजय’लाई अक्षर समेत छर्न गाह्रो भयो । -विजय सुब्बा
साथीहरू घर घरै न्यानो गरी सुते होलान् ।
आफू भने ‘मनु’जीको पछि पछि लाग्दो रहेछु ।। -मनु ब्राजाकी
कहा पुग्थे ल ‘गोर्खे’का सवाल,
घरैहुल्ने भएपो माधुरीको ।। -गोर्खे साइालो
नेपाली गजलमा प्रयोग हुने शास्त्रीय लयलाई नै बहर भनिन्छ । संस्कृत काव्य परम्परामा ‘छन्द’ भने झैं फारसी गजल परम्परामा ‘बहर’ भनिन्छ । यसले गजलको लयअनुसानलाई निर्धारण गरेको हुन्छ ।
उर्दु तथा फारसीमा थुप्रै बहरहरू छन । पचास जति बहरहरू र त्यसमा पनि भेद तथा उपभेद भएको कुरा विभिन्न समाचोलकहरूले उल्लेख गरेका भए पनि गजलकार गोर्खे साइालोले पल्ब साहित्यिक पत्रिका – गजल विशेषाङ्कमा -भाग – १३ मा) नेपाली बहरका ११, मात्रिक बहरका ४ र शास्त्रीय बहरका १९९ गरी जम्म २१४ ओटा बहरको वारेमा परिचय सहित उल्लेख गरेका छन ।
तर नेपाली गजलमा ती सवै बहरहरूको प्रयोग हुन सकेको देखिदैन । नेपाली गजलमा सिमित बहरहरूको मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । हुन त बहरमा गजल लेख्नेको संख्या नै त्यति वढी नभए पनि । अर्थात मुक्त बहर -छन्द)मा लेख्नेको तुलनामा यस्ता मानिसहरूको संख्या न्युन रहेपनि पछिल्लो समयमा आएर यस्तो संख्या बढ्दो छ । शास्त्रीय बहर तर्फको आकर्षण दिनानुदिन वढ्दो देखिन्छ । फुटकर रुपमा मात्र नभएर पछिल्ललो समयमा आएर शास्त्रीय बहरमा मात्र लेखिएका गजलहरूको सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भैरहेका छन र हुने क्रममा छन । यो क्रम वढ्दो छ ।
केही पिङ्गला छन्दहरू शास्त्रीय बहर संग मिल्न जान्छन । त्यसैले पनि पिङ्गला छन्दको राम्रो ज्ञान भएकालाई शास्त्रीय बहरमा गजल सिर्जना गर्न सहयोग मिलेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आएर त्यस्ता बहरका साथसाथै अन्य स्व निर्मित बहरमा गजल लेख्नेको संख्या पनि कम छैन ।
रुक्नहरूको संयोजनबाट बहरहरूको निर्माण गरिन्छ । रुक्न भनेका बहरका गण हुन । रुक्नहरूको समूहलाई अर्कान भनिन्छ । हुन त पिङ्गला छन्दमा -यमाताराजभानसलगा) आठ गण भए झैा इस्लामिक आठ रुक्नहरूको पनि चर्चा गरिएको पाइन्छ । तर उर्दू तथा फारसीमा प्रयोग हुने रुक्न त्यति मात्र होइनन । उर्दू तथा फारसीमा रुक्नहरू यति नै छन भनेर किटानी गरिएको पनि पाइदैन ।
गजलका बहरहरूलाई मूलरुपमा मुफरद -मूल) मुरक्कब -मिश्रति) तथा मुजाहिफ -परिबर्तित) गरि तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । मुफरद बहर एउटै रुक्नको दुई, तीन र चार आवृत्तिबाट बन्छ भने मुरक्कब बहर दुई वा दुई भन्दा बढी फरक फरक रुक्नको मेलबाट बन्दछ र मुजहिफ बहर भने टुक्रिएका रुक्नको मेलबाट बन्छ ।
न्ोटः काब्य विधामा संस्कृत छन्दका गणमा क्ष् -लघु) र क -गुरु) भए झैा गजलका बहरमा भने रुक्नका लघुलाई १ र गुरुलाई २ ले जनाइन्छ ।
यहाा बहरको वारेमा सङ्क्षिप्त जानाकारी मात्र दिन खोजिएको हो । बहरको वारेमा पूर्ण जानाकारी भने नेपाली गजलमा शास्त्रीय बहरकोे आवस्यक्ता र सान्दर्भिकता नामको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
गजल मूलतः शास्त्रीय विधा हो । थोरै शव्दले पनि धेरै अर्थ दिन सक्नु नै यस विधाको विशेषता हो । यो सर्वमान्य सत्य पनि हो । गजल सरल भएर पनि सशक्त छ । कोमल तथा हार्दिक भएकै कारणले आज यो विधा नेपाली माटोमा सवैको पि्रय भएको छ । पुराना तथा नयाा सवै स्रष्टाहरूको यो विधा तर्फ अधिक आकर्षण रहेको पाइन्छ ।
नेपाली गजलले छोटो समयमै लोकपि्रयता कमाएको छ । यो लोकपि्रयतालाई वचाइराख्नु नितान्त जरुरी छ । यस तर्फ तमाम गजलप्रेमीले सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । गजलमा परिस्कारको आवस्यक्ता महसुस हुन थालेको छ र यही आवस्यक्तालाई मध्यनजर राख्दै पछिल्लो समयमा गजलमा परिस्कार आन्दोलनको कार्य पनि सुरु भएको छ । परिस्कार गरेर गजललाई शसक्त एवम् मर्यादित पार्ने काम आफैमा स्वागत योग्य छ । त्यस्तै केही मानिसहरू गजलमा नयाा प्रयोग भित्र्याउन पनि लागिपरेका छन । नविनतम प्रयोगले गजललाई सुन्दर तथा व्यापक वनाउछ । तर प्रयोगको नाममा गजललाई यसको मर्मबार्ट अलग्याउने । सरलताबाट क्लिष्टता तर्फ डोहोर्याउने काम भने हुनु हुादैन । अर्थात यसले गजललाई मजवुत नभएर अझ कमजोर वनाउछ भन्ने कुरालाई सवैले वुझ्नु र वुझाउनु आवस्यक छ ।
(१) बराल, कृष्णहरि – (२०६४) गजल सिद्धान्तर परम्परा ÷ साझा प्रकाशन
(२) रावल, ललिजन – (२०६५) प्रतिनिधि नेपाली गजलहरू ÷ विवेक सिर्जशील प्रकाशन समूह
(३) परिश्रमी, घनश्याम न्यौपाने (२०६४) गजल ः सौन्दर्य र मिमांसा ÷ वुटवल सनसाइन आवासीय मावि
(४) बिरही, केशु – (२०६३) दन्किएको आगो (गजल सङ्ग्रह) ÷ नेपाल गजल प्रतिष्ठान
(५) विवश, वलिभद्र कोइराला – (२०६७) काँचको मुटु ÷ पूर्वाञ्चल गजल मञ्च
६) बिरही, केशु – (२०६४) नेपाली गजल र यसमा प्रयोग भएका केही बहरहरू ÷पल्लव गजल विशेषाङ्क
(७) साँइलो, गोर्खे (२०६४) हुसैन खाँको डायरीभित्र लहरिदा ÷ पल्लव गजल विशेषाङ्क
(८) पन्थी, देबी (२०५९) गजल सिद्धान्त र समालोचना विविध वाङ्मय प्रतिष्ठान
(९) नेपाल, देवी ÷ सुवेदी, सुरेश ÷ ओझा, घनेन्द्र – (२०६६) गजल कसरी लेख्ने ?
(१०) अर्चना, सप्रेम (२०६६) सपना कहा छुन सक्छु र ! (गजल सङ्ग्रह) तन्नेरी डट कम
(११) वराल, विभोर (२०६६) उड्दै गए सपनाहरू (गजल सङ्ग्रह) तन्नेरी डट कम